Dhegaysiga khudbadaha Musharaxiinta u taagan xilka Guddoonka Baarlamaanka Koofur Galbeed oo manta bilaabanaysa - Awdinle Online
Dhegaysiga khudbadaha Musharaxiinta u taagan xilka Guddoonka Baarlamaanka Koofur Galbeed oo manta bilaabanaysa
Musharaxiinta u taagan xilka Guddoonka Baarlamaanka Koofur Galbeed ayaa maanta lagu wadaa inay khudbad ka hor-jeediyaan Xildhibaannada Baarlamaanka, si ay ugu soo bandhigaan qorshahooda siyaasadeed haddii loo doorto xilkaas.
Illaa shan Musharaxa ayaa u taagan qabashada xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo Labadiisa Kuxigeen, iyadoo durba Musharaxiintan ay olole ka bilaabeen magaalada Baydhabo, si ay u kabsadaan taageerada Xildhibaannada.
Xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa waxaa u taagan Amb. Cali Saciid Fiqi iyo Maxamed C/raxmaan Nuur, waxaana aad loogu saadaalinayaa in Amb. Cali Fiqi ku guuleysan karo xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka Koofur Galbeed.
Sidoo kale xilka Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Baarlamaanka ayaa waxaa u taagan labo Musharax oo mid ka mid ay tahay Haweeney lagu magacaabo Aamina Isaaq Maxamed iyo Xildhibaan Maxamed Nuur Maxamed
Xilka Guddoomiye kuxigeenka labaad ayaa waxaa u taagan hal Musharax oo ah Haweeney lagu magacaabo Shamso Maxamed Yarow
Khudbadaha Musharaxiinta u taagan xilka Guddoonka Baarlamaanka Koofur Galbeed ayaa maanta kaliya ah, waxaana maalinta berri oo taariikhda tahay 1 April lagu wadaa inay dhacdo doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo labadiisa kuxigeen.
Previous articleSiday uga hortagi karan Madaxda IGAD faafista caabuqa Covid-19 ?
Next articleKhasaaro ka dhashay Qarax lala eegtay Ciidamo Itoobiyaan ah